Ukuyila iiNkqubo zoNyaniso eziNgezelelweyo: Imimandla yokuthuthuzela, ujongano, kunye nesicatshulwa
ipilisi emhlophe teva 3925
Iinyani ezingathandabuzekiyo (AR) zokusebenza ziyavela nje. Itekhnoloji ye-AR kunzima ukuyiphuhlisa kuba asikaqondi zonke izicelo. Sesiphi esona sizathu sokulinga ukubona ukuba i-AR iza kuza njani iluncedo. Qhubeka ufunda ukuze ufunde ngemimandla yokuthuthuzela, ujongano, kunye nokubhaliweyo kwii -apps ze-AR.
Uyilo losetyenziso lwe-AR: Ukuqonda imimandla yentuthuzelo
Ukuqonda ukusebenzisana kwabasebenzisi ngaphakathi kweendawo zabo zokuthuthuzela kubalulekile, ngakumbi kwizicelo ze-AR ezinokuthi zijolise ngakumbi ekwenzeni umsebenzi. Kuya kufuneka uqonde umohluko phakathi kwemimandla yokuthuthuzela yokunxibelelana nesixhobo esiphakamileyo se-AR xa kuthelekiswa nemimandla yokuthuthuzela yokunxibelelana ne-AR kwisixhobo esiphathwayo.
Amava e-AR afakwe entloko afana ncam ne-VR, ngaphandle kokumbalwa. Kuya kufuneka unciphise ukuba bangakanani abasebenzisi abaya kufuneka ukuba bahambise iintloko zabo kuwo nawaphi na amava amade kunemizuzu embalwa. Nangona umsebenzi wabo ugxile kwiVR, uMyili weGoogle VR uMike Alger kunye noAlex Chu woPhando lweSamsung bathi inqanaba labasebenzisi lokuthuthuzela xa bejikeleza iintloko zabo ngokuthe tye ziidigri ezingama-30 kwicala ngalinye, benokujikeleza okuphezulu kwama-55 degrees. Ukuhamba ngokuthe nkqo, ukujikeleza kweedigri ezingama-20 ukuya phezulu kukhululekile, ngokujikeleza okuphezulu ukuya kuma-60 degrees. Ukujikeleza ezantsi kujikeleze iidigri ezili-12 ngokufanelekileyo ubuninzi beedigri ezingama-40.
Xa uchaza indawo yakho yokuthuthuzela kwi-AR ekhwele entloko, kubalulekile ukuba uqwalasele ukuba isicelo sakho siza kusetyenziswa njani. Ngaba iya kufuna ukuhlangana ngokuthe ngqo kwabasebenzisi, njengokulandela umkhondo wesandla kunye nokuthambo, okanye ukhombe nje kwaye ucofe ngokusebenzisa isilawuli okanye iphedi yokuchukumisa? Ukuba iya kufuna ukuhlangana ngokuthe ngqo, jonga indlela enokusetyenziswa kakuhle, ngakumbi ukuba isicelo senzelwe ukusetyenziswa okwandisiweyo. Njengokuba uninzi lwezicelo ze-AR zisetyenziswa ngokukuko, oku kuthathelwa ingqalelo kuya kuba kubaluleke ngakumbi.
Ingxelo nge-ergonomics yeofisi ngu UDennis Ankrum ibonelela ngesikhokelo esihle samava e-AR ahleliyo afuna ukuhlangana komsebenzisi, ngakumbi usetyenziso lwe-AR ekujongwe ukuba lusetyenziswe ngokudibeneyo kunye (okanye njengokutshintsha) ukusetyenziswa kwekhompyuter ngokwesiko. Uluhlu lwe-Ankrum lubonisa umgama ochanekileyo wokujonga esikrinini kubasebenzisi abaninzi njengee-intshi ezingama-25 ukusuka emehlweni, ngokukhethekileyo ngakumbi, kunye nokubekwa ngokukuko kwizikrini njenge-15 ukuya kuma-25 degrees ngaphantsi kwendiza ethe tyaba kwiliso lomsebenzisi, kukhokelela kwindawo encinci yokuthuthuzela ehleliyo Amava eAR.
I-Meta igqibe izifundo ezifanayo kwaye yafumana iziphumo ezifanayo kunye ne-headset yayo yokuma kunye nokuhlala amava. Kukho indawo efanelekileyo yokuqukethwe ekhoyo phakathi kwendlela apho izandla zomsebenzisi ziza kufunyanwa yi-headset, i-FOV ye-headset ngokwayo, kunye ne-angle yokujonga i-angle yomsebenzisi. Iseti nganye yentloko yahluke kancinane, kodwa ngokubanzi i-ergonomics yamava entloko ye-AR ebambekayo iyinyani kumaqonga amaninzi.
Itekhnoloji yokulandela umkhondo esetyenziselwe ukulandela umkhondo wesandla seMeta 2 inendawo yokuchonga ye-68 degrees, elungiselelwe kumgama weemitha ezingama-0.35 kunye ne-0.55 yemitha ukusuka kumsebenzisi. Idityaniswe ne-40 ye-FOV ethe nkqo ye-headset, indawo efanelekileyo yomxholo inokusekwa kwindawo ekuhlangana kuyo into efanelekileyo ukuba umsebenzisi ayifikelele kwaye ayibone.
Indawo yothuthuko yokunxibelelana ayifani kuyo yonke i-headset ye-AR, kodwa ukuchaza le mimandla kuya kufana nakweyiphi i-headset yangoku okanye yexesha elizayo. Qaphela ngononophelo isixa sokuhamba komsebenzisi kunye nokunxibelelana nesicelo sakho esifunayo kunye nokuba yeyiphi imimandla yentuthuzelo yezixhobo zakho zekhompyutha. Qaphela ukunciphisa inani lokujikeleza kwentamo okanye intshukumo yomsebenzisi engeyomfuneko. Ixesha lokuqala apho umsebenzisi kufuneka afikelele khona ukuze akhanyise isibane esibonakalayo kumava akho e-AR kunokuba yinoveli. Ukuba umsebenzisi kufuneka enze eli nyathelo amatyeli amaninzi, iya kukruqula ngokukhawuleza.
Imimandla yentuthuzelo yeselfowuni yahluke kakhulu kuleyo yezixhobo ze-AR ezixhonywe entloko. Ngokwamava e-AR ahambayo, umsebenzisi unyanzelekile ukuba abambe isixhobo sakhe kumgama othile phambi kwamehlo akhe aze ajonge ingalo yakhe okanye intloko yakhe ukuze abone imeko eyandisiweyo ngaphakathi kwesixhobo. Ukubamba isixhobo ngale ndlela kunokuba kukurhafisa kakhulu emva kwexesha, ke zama ukufumana indlela yokunciphisa ukungaphatheki kakuhle komsebenzisi. Ukuba isicelo sakho sifuna isixa esikhulu sokuhamba komsebenzisi okanye ixesha elide apho umsebenzisi kufuneka abambe isixhobo sakhe phambi kwakhe, fumana iindlela zokubonelela ngamaxesha okuphumla ukuvumela umsebenzisi ukuba aphumle iingalo zakhe ithutyana ngaphambi kokuqhubeka.
Uyilo losetyenziso lwe-AR: Iipateni zomsebenzisi
Ezona ndlela zilungileyo zokuyila ujongano lomsebenzisi we-AR zisachazwa. Akukho maninzi amava omsebenzisi achaziweyo (i-UX) iipateni ezinokuthi zabayili be-AR babuyele kuzo njengeendlela ezilungileyo zokulindelwa ngumsebenzisi xa engena kumava ongezelelweyo. Kwaye i-AR yinto entsha ngokupheleleyo, eyahlukileyo kwizikrini ze-2D abantu abaqhelileyo. I-AR iya kwenza ukuba abantu baphinde bacinge ngendlela esiphatha ngayo i-interface yomsebenzisi (UI) yoyilo.
Ihlabathi le-2D lekhompyuter linobeko obucwangcisiweyo obunama-2D windows kunye neemenyu. I-AR yenza ukuba abaphuhlisi basebenzise indawo ye-3D. Xa uyila i-AR UI yakho ye-AR, cinga ngokwenza ujongano lomhlaba kunye nokucwangcisa izixhobo zakho ze-UI kunye nomxholo ojikeleze umsebenzisi kwi-3D, endaweni yomdibaniso weefestile ezikwiskrini zekhompyuter ezisibekele zona ngoku. Cinga ukuvumela umsebenzisi ukuba asebenzise indawo ye-3D njengesixhobo sombutho wezinto zakhe, ngokuchaseneyo nokufihla okanye ukubeka umxholo kumafolda okanye kwizikhombisi-isenzo esiqhelekileyo kwii-UI ze-2D zangoku. I-AR ineendlela zokuphepha ngobabalo ukufihla umxholo.
Endaweni yokufihla amamenyu ngaphakathi kwezinye izinto, sebenzisa imeko-bume ebonakalayo efumanekayo kuwe ukulungiselela useto lwakho. Iimenyu ezifihliweyo kwizikrini ze-2D zihlala zenziwa ngenxa yesithintelo sendawo okanye umyili woyilo lokuba isixa somxholo siya kuba nzima kumsebenzisi ukuba asisebenzise. Ngamava ongezelelweyo kwimeko yento onokuthi uyiqwalasele isixa esikhulu solwazi, ucinga ngokuhlela izinto ngokwamaqela kwisithuba se-3D.
Endaweni yokuqulatha umxholo ngaphakathi kwiimenyu, jonga ukubanakho kokwenza umxholo omncinci ukulungiselela indawo ejikeleze umsebenzisi wakho. Umxholo onokuthi uthathe isixa esikhulu sendawo unokwenziwa ube mncinci de umsebenzisi abonakalise umnqweno wokunxibelelana nawo.
Oko akutsho ukuba unokuhlala uziphepha izinto ezifihliweyo okanye ezinendawo yokuhlala. Zombini ziya kuhlala zikhona kuyilo lwe-UX yeAr. Ukuba ufumanisa isidingo somxholo wendlwane, zama ukugcina amanqanaba endlwane endawo.
Kwii-UI ezininzi zemveli, umxholo onikiweyo unikiwe. Kwikhompyuter yendabuko, abasebenzisi baqhelene ngokupheleleyo nokucofa kwiirejista ezine okanye ezintlanu ezahlukileyo zokuhlala ukuze bafumane ifayile. Nangona kunjalo, ukuhlala nzulu komxholo kunokuba nokudideka kakhulu ekupheliseni abasebenzisi, ngakumbi kwindawo ye-3D ye-AR. Umsebenzisi oza kuhamba kwisithuba se-3D ngokusebenzisa izinto ezininzi ezihleliweyo uya kukhawuleza akhathazeke ngamava. Ukuhlalela okungazinzanga kunye nokwenza ukuba izinto zifikeleleke ngokulula ngaphakathi kwendawo kufuneka zenze abasebenzisi bakwazi ukufumana umxholo ngokukhawuleza.
Nciphisa iimenyu ezandayo nezifihlakeleyo kangangoko kunokwenzeka kwisithuba se-AR. Ezi patheni zinokuthi zisebenze kakuhle kwizikrini ze-2D zexesha elidlulileyo, kodwa azidingeki kwilizwe le-3D i-AR izama ukulinganisa. Imenyu eyandisiweyo / efihliweyo inokuzisa inqanaba lokuntsokotha ekufuneka uliphephe, ukuba kunokwenzeka.
Iwindows ye-2D yefestile ye-UI yangoku yeekhompyuter iyasiqhela kwi-iconography kunye neemilo ze-2D ezingafakwanga ezimele izixhobo zelizwe lokwenyani. Ezi mpawu zihlala zinokufihla ukusebenza ngakumbi, ezinje ngemenyu eyandisiweyo okanye efihliweyo. Nangona kunjalo, umhlaba we-AR ugcwele iipateni ezintsha zabasebenzisi zokufunda. Zama ukunqanda ukudala inkqubo entsha yeempawu ze-2D kumava akho e-AR. Oku kunokunyanzela abasebenzisi ukuba baqashele kwaye bafunde inkqubo oyenzileyo enokuthi ingabi nanto kubo.
Ukuba isixhobo senzelwe ukuba sisetyenziswe ngaphakathi kwe-3D indawo yamava, buyisela ii-icon ezingaqondakaliyo okanye amaqhosha anezinto ze-3D kwindawo enika umsebenzisi umbono wenjongo yesixhobo. Jonga iimeko zehlabathi zokwenyani ezinje ngokuyila iidesika okanye izitudiyo zobugcisa zokuphefumlelwa. Iindawo zokusebenzela zehlabathi lokwenyani zinokubonelela ngemizekelo yendlela yokwenyani izinto ze-3D ezilungelelaniswe ngayo kwimeko ebonakalayo, esiqhelo i-UI yakho kwi-AR eya kuzama ukuyilingisa.
yintoni eyenziwa yi-folic acid
Okokugqibela, vumela umsebenzisi wakho ukuba azenzele kwaye acwangcise iindawo zakhe ngendlela ahlala ngayo ekhululekile, ngendlela efanayo anokucwangcisa iidesika zakhe zomzimba okanye iindawo zomsebenzi ekhaya okanye emsebenzini. Oku kuyakwandisa ukubanakho ukuba uya kukhululeka ukusebenzisa inkqubo oyenzileyo.
Ukuqonda isicatshulwa kwi-AR
Qwalasela ngononophelo ubude bokubhaliweyo kokubhaliweyo xa usenza isicelo sakho se-AR, kwaye uyivavanye ngexesha lokuvavanywa kumaqonga ehardware amaninzi kunye neemeko zokusingqongileyo kangangoko. Ngokuqinisekileyo ngekhe wazi ukuba loluphi uhlobo lwendalo oluza kusebenza kuyo. Indawo emnyama kakhulu ebusuku? Igumbi eliqaqambe kakhulu emini emaqanda? Ukuqinisekisa ukuba isicatshulwa siyabonakala, cinga ngokuyibeka kwimvelaphi enemibala eyahlukileyo.
Lo mfanekiso ubonakalisa umzekelo wokungabinakho ukuba semgangathweni ngaphezulu kwendalo efanelekileyo (ekhohlo), kunye nokuba isonjululwa njani imeko-bume engaziwayo ngemvelaphi yokubhaliweyo (ngasekunene).
Ifoto ngu-Jeremy Bishop kwi-Unsplash (https://unsplash.com/photos/MhHbkyb35kw)
Isisombululo esilula sokufundeka kokubhaliweyo kwiindawo ezingaziwayo.
Ifoto ngu UJeremy Bishop kwi-Unsplash
Ubungakanani bokubhaliweyo kunye ne-typeface (ifonti) inokuchaphazela nokufundeka kokubhaliweyo. Ngokubanzi, kuya kufuneka ukhethe iintloko ezifutshane okanye iibhloksi ezimfutshane zombhalo xa kunokwenzeka. Nangona kunjalo, uninzi lwezicelo ze-AR ziluncedo esekwe, kwaye ngamanye amaxesha zibandakanya ukuchitha iibhloko ezinkulu zombhalo, ke ekugqibeleni abayili kuyakufuneka bafumane indlela yokwenza amaxwebhu okubhaliweyo akwifomu ende anokulawulwa kwi-AR.
Ukuba ukusetyenziswa kwamaxwebhu amade kuyafuneka kwisicelo sakho, qiniseka ukuba ubungakanani befonti bukhulu ngokwaneleyo ukuba umsebenzisi angakwazi ukukufunda kakuhle. (I-Meta icebisa ubuncinci bobungakanani befonti ubuncinci be-1cm ukuphakama xa isicatshulwa siyimitha engama-0.5 ukusuka kwiliso lomsebenzisi.) Kulumkele ukuqaqamba kweefonti ze-calligraphic. Endaweni yoko, ncamathela ekusebenziseni iifonti ze-serif okanye ii-sans-serif ezilula kwezi bhloko zinkulu. Ukongeza, iikholamu ezincinci zesicatshulwa zikhethwa kwiikholamu ezibanzi.
Ukuboniswa okukhawulezayo kokubonakalayo okubonakalayo (i-RSVP) yokufunda ngokukhawuleza yindlela yokubonisa uxwebhu kumsebenzisi igama elinye ngexesha. Oku kunokuba yindlela elungileyo yokusebenzisa iibhloko ezinkulu kwi-AR, kuba ivumela igama elinye ukuba likhulu kwaye laziwe, endaweni yokunyanzela isicelo sakho ukuba siphendule ukubonisa ezi bhloko zinkulu.
Nawuphi na umboniso wolwazi okanye wokufundisa, zama ukuthanda amagama encoko uninzi lwabasebenzisi abaya kuyiqonda ngaphezulu kwamagama obuchwephesha anokudida umsebenzisi. Ayikwazi kufumana umphezulu wokubeka into yakho. Zama ukuhambisa ifowuni yakho kancinci kancinci kunokuba kufanelekile ukufunyanwa kwePlani kusilele. Nceda ubone inqwelomoya.
Uyilo losetyenziso lwe-AR: Uvavanyo, uvavanyo, 1, 2, 3
Izicelo zeAR zisachaza ukuba yintoni eyenza unxibelelwano lube lolungileyo okanye olubi. Ke, kuya kufuneka usebenze ngokuqikelela kwakho, kwaye uvavanye ezo ngcinga rhoqo rhoqo. Ukuvavanywa ngabaphulaphuli abaninzi kuya kunceda ukuveza into esebenzayo kakuhle kunye nento onokuyifuna ukuze ubuyele kwibhodi yokuzoba nayo. Xa kuvavanywa isicelo sakho, nika abasebenzisi bakho bovavanyo kuphela inani elifanayo lolwazi eliza kufumana umsebenzisi oqhelekileyo wesicelo sakho. Ukuvumela abavavanyi bakho ukuba bazame ukusebenzisa iapp ngaphandle koncedo kuya kukunceda ungabakhokeli ngokungazi kwisicelo sakho kwaye kuya kukhokelela kwiziphumo zovavanyo ezichanekileyo.
ukunciphisa iziphumo ebezingalindelekanga zesulfa
zingaphi mls kwi icephe
isetyenziselwa ntoni ifototidine
UGoogle sketchup 3d indlu yokugcina
Wenza ntoni umphicothi zincwadi
IsiFrentshi ukuya kwisiNgesi ukuguqulela uguqulelo lukaGoogle